बाटोमा भेटिएको पैसा टिप्नुहुन्छ? पार्छ यस्तो प्रभाव, यसो भन्छ वास्तु शास्त्र । —
2020-01-03 2020-03-08 admin
काठमाडौँ । हामी धेरै जसो मानिसहरूले कहिलेकाहीँ अचानक बाटोमा पैसा भेटाउने गर्दछौ । हामीहरू बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै अचानक पैसा देख्दा टिप्नु सभाविक नै हो । वास्तु शास्त्र अनुसार बाटोमा भेटिएको पैसाले आफ्नो व्यक्तिगत काम गर्नु भन्दा पनि कुनै मठमन्दिर या पितृको नाममा अन्न किनेर दान गरेको अवस्थामा घरमा धन सम्पत्ति वृद्धि हुनेछ ।
प्रायः कुण्डलीमा शुक्र र चन्द्रमाबाट बन्ने लक्ष्मी योग त्यस्तै बृहस्पति र चन्द्रमा मिलेर बनाउने गजकेशरी योग या चन्द्र मंगल मिलेर बनाउने महालक्ष्मी योग भएकाहरुका लागि माता लक्ष्मीको विशेष कृपा हुने भएकाले अचानक पैसा भेटाउने योग निर्माण हुने वास्तु शास्त्री बताउँछन् । यसरी भेटाएको पैसा आफ्नो निजी काम भन्दा पनि समाजकल्याणमा लगाउन सकियो भने राम्रो कार्यसिद्ध हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
भेटाएको पैसा नोट या सिक्का दुवै हुन सक्छ । यदि सिक्का भेटाएको अवस्थामा आफ्नो पूजा या तिजोरीमा राख्न सके घरमा धनको वृद्धि र त्यही पैसाले सह रहने र कहिल्यै पनि लक्ष्मीले साथ नछाड्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
कहिलेकाहीँ मन्दिरमा जाने क्रममा पैसा भेटाउने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा मन्दिरमा चढाए नवग्रहको आशिर्वाद प्राप्त हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । मानिसले भेटाएको पैसा घरमा ल्याउन नहुने पनि भनेको सुनिन्छ, घरमा ल्याउदा कुनै प्रकारको समस्या नहुने र घाटा नहुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
अस्ट्रेलियाको अध्यागमन विभागले मापद’ण्डमा कसिलो बनाउँदै ,विदेशी विद्यार्थीको लागि बसाइ झनै क’ठिन
सा’वधान ! यस्ता ७ चरित्र भएका पुरुषसँग भुलेर पनि प्रेम नगर्नुस्, धो’का पाइएला
साङ्केतिक तस्बिर/ एजेन्सी– प्रेम एक यस्तो आकर्षण हो जहाँ केही बेरको भेट वा कुराकानीले पनि ठुलो...
जिन्दगीभर खुसी रहने यस्ता छन् १६ उपायहरू ! जानीराख्नुहोस्
हरेक मानिस सधैँ खुसी रहने चाहना राख्छन् । तर सधैँ यस्तो हुँदैन । मानिसहरूले ठुलो कुरा...
आँचलशर्माले लगाईन ६० लाखको गहना र १६ लाखको लेहेंगा, -( भिडियो र तस्बिर सहित )
काठमाडौ । आँचलशर्मा र उदिपश्रेष्ठको विवाहको रिसेप्सनका भिडियो र तस्विर अहिले सामाजिक संजालमा चर्चाको विषय बनेको...